China elula enye idrowa lokulala nasebusuku kwicala lekhabhathi # 0122 Ukwenziwa kunye neFektri | Yamazonhome
Igumbi elinye lokulala nekhabhathi esecaleni # 0122
Igama: IKhabhinethi yasebusuku
Inombolo yomzekelo: Amac-0122
Ubukhulu: 350mm * 500 * 580mm
Itafile enye yokugcina ibhedi enye yedrowa
Zonke izinto ezikhethiweyo ezikumgangatho ophezulu ezikhethiweyo ezikumgangatho ophezulu, ezomeleleyo nezingqindilili, ezizinzileyo nezomeleleyo, iimpahla zokwenene ngexabiso elifanelekileyo, kwaye zizele zizixhobo. Umphezulu wekhabhinethi uyandiswa kwaye uqinisiwe, ugudile kwaye ubuthathaka, kulula ukuwucoca. I-oki emhlophe ilwa ngokuthe ngqo, ngaphandle koloyiko lokubhaptizwa kweminyaka. Ngokuhambelana nomgangatho wamazwe aphesheya "wokulwa nokuqhekeka kunye nokuchasana nokuchasana", sikhetha i-oki emhlophe engeniswe evela eMntla Melika, sukuxuba nayiphi na ibhodi, ingabinanyani, kwaye ungavumi ukuthambisa. Yenza kuphela ifanitshala efanelekileyo kubantu abaqhelekileyo.
Ugcino olunemigangatho emininzi kwikhabhinethi esecaleni
Indawo yokugcina amanqanaba amaninzi iyimfihlo kwaye ivulekile. Umdibaniso wendawo evulekileyo kunye nedrowa evaliweyo iqinisekisa isiseko somthamo omkhulu kwaye ikwahlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabantu abahlukeneyo. Itafile yonke esecaleni kwebhedi yamkela ubeko oluthe tyaba lwento yonke kunye nezinto ezenziwe ngomthi, ezingagcini nje ngokuqinisekisa ukuhambelana kokutya okuziinkozo, kodwa kunciphisa nokuqhekeka ukuya kuthi ga kwinqanaba elikhulu, eluvavanyo lomsebenzi kunye nezinto ezichitha ixesha.
Ikhethiwe i-oki emhlophe ekumgangatho ophezulu eMntla Melika
Idrowa ephezulu ingavalwa ukubeka izinto ezizezakho, amanqaku edayari, amaxwebhu esiqinisekiso, njl.njl. Igumbi elivulekileyo kumgangatho osezantsi linokubamba izinto zokufunda, iifowuni eziphathwayo, i-IPAD, njl. Phambi kokuba ulale uthintele uthuli. Umphezulu ophezulu ongaphezulu ungabekwa emehlweni nakwezinye izinto ezizezakho.
Akukho ukuxhathisa ekutsaleni indawo eqinileyo yomthi kaloliwe
Umgaqo oqinileyo wesilayidi somthi, ityhilo elithe cwaka kunye nokutsala, ukugudla kwaye akukho ukuxhathisa, thintela ingxaki yokurusa, yomelele Isiphatho somthi esomeleleyo silula kwaye sihle, kwaye itekhnoloji ye-groove efakelweyo igcina indawo kwaye iziva ikhululekile. Ububanzi be-groove buhambelana nobubanzi bomnwe womntu, kwaye kulula ukuyivula kwaye uyivale.
Nobungane humanized isidanga sekona yekona egobile egumbini
Ikona yetafile ye-arc enesidanga se-45 iye yaphoswa ngokuphindaphindiweyo ukuyenza ijikeleze kwaye igudise ukuthintela amaqhuma. Ukubonisa ngokungazi, ukujonga emva kancinci, kunokuba lixesha apho umiselwe ukudibana nawe. Akukho sidingo sokuntsokotha ngabom, buyela kwinjongo yoqobo kunye nokwenza lula ubunzima.
Imilenze yekhabinethi yeBold edibanisa imfashini kunye nendalo
Iikona ezijikeleziweyo zeekhabhathi zomthi eziqinileyo ezidityaniswe nezinto zokubopha zenza ukuba zibhalwe ngakumbi kwaye zizinzile. Ukuhlanganiswa kwefashoni kunye nendalo kubonakala kwiinkcukacha ezingaqhelekanga. Kuthetha ukuba kwendalo ngaphandle koguqulo, ukugcina umkhondo wendalo wokhuni lwendalo, ubunjani buthambile kwaye bucacile, bulula kwaye buyindalo.
Egqithileyo Isibambo esimagqagala somzobo ophindwe kabini webhedi yikhabinethi esecaleni kweenkuni # 0121
Umgangatho oManzi weeNdawo eziQinisekisiweyo zeNdawo yeCafe Cafe
Ezijongene nemiba ngemiba yezinto Iinkuku zokuzalela House S elula ...
Intente elula yoLuhlu lweeNtente eziPhakathi kunye noPhakathi 0269